Nissan Wingroad 2011 only 57.000 KM | Nissan | Mandalay Region
Nissan Wingroad 2011 only 57.000 KM - 229.00 Lakhs
ေရာင္းရန္: Nissan Wingroad 2011 full options ။ 57000 ကီလိုမီတာ။ နိုင္ငံျခားသားပိုင္။ မႏၲေလးမွတ္ပုံတင္၊ 6L/XXXX ကားသည္ MDY တြင္ရွိသည္။ ၂၂၉ သိန္း။
For sale: Nissan Wingroad 2011 full options. Only 57000 kms. Foreigner owned. Mandalay registration 6L/XXXX car is in MDY. 229 Lakh.
Name : wim
Mobile : 09250294041
Location: Mandalay,, Mandalay Region, Myanmar
Nissan Safari 1998 4.2 diesel turbo Auto gear 4WD ခုံသုံးတန်း ၇ ယောက်စီး Digital Ac Round Ac IRON MAN ရှော့ဘား ကွိုင် စနော်ကယ် တပ်ပြီး Engine oil auto oil အသစ် licen အသစ်ဝင်ပြီး Engine အငွေ့မရှိ pump ကောင်း Price 335 ညှိနှိုင်း အလဲအထပ်ရ Ph 0977339589...
Nissan Juke 2011 1500 cc,2WD ရန်ကုန်လိုင်စင် 7N , Black , RX type V Grade မြင့်၍လူကြိုက်များသော အတွင်းခန်း အနီရောင် Push Start, Smart Key, Digital Aircon, Original TV & Backcam Original Alloy with New Tyre Original Fog Lights3Mood Driving (ဆီ...
Luxury ဇိမ်ခံSaloonကားလေးကို ဆီစားသက်သာ၊ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရုပ်ထွက်အလန်းလေးစီးနိုင်ဖို့ Nissan Latio ကားရှယ်လေး တစ်စီးရောင်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ Nissan Latio For Sale ! Model - 2012 (November) Colour - Coffee Brown Engine - 1200 Cc with Turbo / 2Wd Pure Drive...